I-China Transparent Masterbatch BT-800/810 yoMvelisi kunye noMthengisi | BGT
Izongezo zokuRisayikilisha iPlastiki
Ukususa inki BT-301/302
Ukususa inki BT-300
Isincamathelisi sePET BT-336
I-Masterbatch engabonakaliyo yeBT-800/810
Ukuqinisa iNyukliya BT-20
Ummeli weNyukliya we-PET-98C
Ipholiyesta & wenayiloni Nucl ...
Ukukhanya kwe-Brightener OB-1
Ukucacisa iAgent BT-9805
I-BT-800/810 Imastbatch esekuhleni nephethe intlaka ye-PP iqulethe i-5% okanye i-10% yokuCacisa uMmeli wesizukulwana sesibini, umsebenzi ofanayo njenge-BT-9803. Isetyenziswa kwi-PP nakwi-LLDPE.
I-BT-800/810: PP intlaka iqulethe i-5% okanye i-10% yokuCacisa uMmeli wesizukulwana sesibini, umsebenzi ofanayo njenge-BT-9803.
I-BT-800/810 ilungele i-crystal resin engaphelelanga ye-PP kunye ne-LLDPE njl.njl.inokuphucula imveliso 'ukungafihlisi kunye nokugqibezela komphezulu, amandla eqine, ukuqina, ubushushu obugqwetha ubushushu kunye nozinzo lobungakanani, ukunciphisa umjikelo wokubumba.
Isetyenziswa ikakhulu kulungiso lweemveliso zeplastiki zenaliti kunye nokuveliswa kwe-PP, LLDPE ukukhanya okuphezulu kokuhambisa umboniso bhanyabhanya, umzekelo ukutya, izinto zokupakisha izinto zokuthambisa, isitya sezonyango njl.
I-White PP granule
25 kg / ingxowa
Yintoni uMmeli weNyukliya?
Ummeli wenyukliya luhlobo lwearhente efanelekileyo yeeplastikhi ezingagqitywanga ezenziwe njengeplypropylene kunye ne-polyethylene. Ngokutshintsha isimilo crystallization yentlaka kunye ukukhawulezisa izinga crystallization, unako ukuphumeza injongo ukunciphisa umjikelo yokubumba, ukwandisa ukucaca umphezulu isilungiseleli seglosi, ngqongqo, lobushushu deformation thermal, eqine amandla nefuthe ukumelana neemveliso ezigqityiweyo.
Polymer ilungiswe ngu Ukucacisa uMmeli,Ayigcini kuphela ngeempawu zokuqala zepolymer, kodwa ikwanomlinganiso wexabiso lentsebenzo elingcono kunezinto ezininzi ezinomsebenzi olungileyo wokusebenza kunye noluhlu olubanzi lwesicelo. Sebenzisa Ummeli wenyukliya kwi-polypropylene ayitshintshi iglasi kuphela, kodwa ithatha indawo yezinye iipolymers ezinje ngePET, HD, PS, PVC, PC, njl.nokwenza ukupakishwa kokutya, ukumiliselwa kwezonyango, inqaku lenkcubeko lokusetyenziswa kwemihla ngemihla, ukucacisa ukusonga kunye nezinye iitafile zebanga eliphezulu.
ITSHAYINA BGT unokubonelela ngoluhlu olupheleleyo lwe Iarhente yenyukliya, enje ngeArhente yokuCacisa, iarhente yeNyukliya yokwandisa ubungqindilili kunye nearhente yeNyukliya yeNyukliya Ezi mveliso zinokusetyenziswa kwi-PP, PE, PET, PBT, NYLON, PA, EVA, POM kunye ne-TPU njl.
(I-TDS epheleleyo inokubonelelwa ngokwesicelo ngasinye “Shiya umyalezo wakho”)
Egqithileyo Ukuqinisa iNyukliya BT-9806
Okulandelayo: I-Masterbatch engabonakaliyo yeBT-805/820
Ummeli ocacisa i-Masterbatch
I-TIANJIN EBALASELEYO YENZULULWAZI YENKCAZO NE-TECHNOLOGY CO., LTD
Isakhiwo se-B603 esiManyeneyo, i-Nombolo 51 ye-Youyibei Road, iSithili se-Hexi, eTianjin, China.